Fandalinana kabary : omena fiofanana ny efa mpikabary (NewsMada) | AEMW
Fandalinana kabary : omena fiofanana ny efa mpikabary (NewsMada)
« Misy amin’ireo antsoina ho mpikabary no tsy afaka miatrika io adidy aman’andraikiny io akory », hoy ny tompon’andraikitry ny fampianarana kabary dingana faharoa. Tsy vitsy ihany koa anefa ireo efa mpikabary manam-piniavana hanatevina ny fahalalany amin’ny alalan’ny fikarohana. Anisany antony roa lehibe nahatonga ny fisokafan’ny fiofanana ho an’ireo efa mpikabary.
Tafiditra ao anatin’ny fandaharam-pianarana ho an’ity dingana faharoa ity ny fandalinana ny fomba fiatrehana ny ady an-kabary. Ny momba ny arofenitra sy ny hatao amin’ny fanatanterahana izany. Fandalinana ny tantara sy fomba. Fikarohana momba ny riba malagasy, sns. Ankoatra ireo rehetra ireo, hamafisina izay nanavia ny mpianatra nahavita ny dingana voalohany, raha ny fanazavan’ny tompon’andraikitra hatrany. Maro rahateo ireo zava-nolalovana tsy nasiam-pandalinana nandritra ny fotoana nianarana kabary. Anisan’ireny ny fanafanana lanonana,…
Raha ny fanazavan’Andrianiaina Daniel, talen’ny Lycée Privé Daniel (toerana hanatanterahana ny fiofanana etsy Andravoahangy Ambony), « avy amina fikambanana samihafa ireo mpampiofana hiantsoroka ity fampianarana dingana faharoa ity ». Hisy koa ny sehatra ifampizarana iarahana amin’ireo mpahay tantara sy fomba, indray mandeha isam-bolana.
Hosokafana rahampitso manomboka amin’ny 8 ora maraina ity fiofanana ho an’ny efa mpikabary ity.
← Laza avy any ampita (NewsMada)
Mpanoratra sy mpikabary : nomem-boninahitra ny nahavita be (NewsMada) →